FENOARIVO - ATSINANANA : Zandary roa nahatratrarana basy halatra sy vola sandoka
Nohamafisin’ny Lehiben’ny Vondron-tobim-paritry ny Zandarimariam-pirenena ao Fenoarivo-Atsinanana fa misy tokoa ny Zandary am-perinasa no manao asa fandrobana olona na koa miray tendro amin’ny malaso mamatsy fitaovam-piadiana azy ireo. 7 mars 2017
Ny tranga farany nisy tao Fenoarivo-Atsinanana no nentina ho vavolombelona teo anatrehan’ny mpanao gazety.
Raha hiverenana ny zava-misy dia 20 febroary lasa teo, dia basy iray vao avy nampiasaina ny alin’ny 19 febroary no very nisy nangalatra. Natao avy hatrany ny fandraisana andraikitra. Ny 22 febroary, nosavaina ny tranon’ny Zandary roa lahy efa noahiahiana amin’ny firaisana tendro amin’ireo jiolahy.
Vaky am-batolampy ny raharaha. Sarona tao an-tranon’ny Zandary iray ilay basy very, niaraka tamin’ny “chargeur” ary bala vitsivitsy. Mbola nahitana vodim-basy mitapaka ary vola sandoka 110 000 Ariary ihany koa ny tranon’ity Zandary am-perinasa ity.
Ankoatra ity Zandary nahatrarana basy sy vola sandoka ireto dia Zandary ihany hafa namany, mpanao asa ratsy ary lehilahy iray ikoizana amin’ny asa fanafihana mitam-basy no indray voasambotra.
Manomboka eto, miezaka ny manatsara fomba fiasa ny Zandarimariam-pirenena, mba hiverenan’ny fahatokisam-bahoaka azy ireo. Sokajiana olon-dratsy ny Zandary manao heloka be vava toy izao ary iharan’ny sazy henjana mifanaraka amin’izany.
Ity andron’ny alatsinainy ity no natolotra Fampanoavana izy telo lahy ireto dia ny Zandary roa ary ilay jiolahy naman’izy ireo.